Home Somali News Al-Shabaab oo weeraray kolonyo uu la socdey guddoomiyaha Mandheera
Kolonyo gawaari ah oo uu la socdey guddoomiyaha Mandheera dalka Kenya, Cali Rooba ayaa koox hubeysan jidka u galeen. Weerarka ayaa ka dhacay meel u dhaxaysa Arabia iyo Omar.
Wararku waxay sheegayaan in ugu yaraan 4 qof ay ku dhimatey weerarkaas qaar kalena waa ku dhaawacmeen. Booliska Kenya ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in guddoomiyah Mandheera Cali Roba uu bed-qabo oo uu ka badbaaday weerarka. Dadka dhintey waxaa ka mid ah duqii hore ee Mandheera oo kolonyada la socdey.
Malayshiyada dhabbaha u galey wefdiga Guddoomiyaha gobolka Mandheera Cali Roba ayaa adeegsadey gantaalada garbaha laga rido ee Baasuukaha loo yaqaan, waxaana ay la heleen labo ka mid ah gawaarida kuwaas oo gubtey. Weerarkan ayaa ahaa mid qorsheysan oo bartil-maameedku ahaa guddoomiyaha sida Boolisku sheegeen, waxaana wefdiga Guddoomiyuhu u socdeen shirar looga hadlaayo amaanka iyo sidii al-Shabaab looga hortegI lahaa.
Gaariga uu saarnaa guddoomiyaha Mandhera ayaa ka gudbey weerarka marka uu dhacayo.
Warbaahinta al-Shabaab ayaa sheegtey in weerarkaas ay fuliyeen ciidamo ka tirsan al-Shabaab, waxaana weerarku ka dhacay meel 28km u jirta halkii al-Shabaab ay ku dileen 28 qof oo ay kala degeen bas bishii Nofeember 2014.